Local NGO အဖြစ် တရားဝင်ရပ်တည်တာ ကောင်းလား/ဆိုးလား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Local NGO အဖြစ် တရားဝင်ရပ်တည်တာ ကောင်းလား/ဆိုးလား ?
Local NGO အဖြစ် တရားဝင်ရပ်တည်တာ ကောင်းလား/ဆိုးလား ?
Posted by ရာဇ၀င်လူဆိုး on Aug 19, 2011 in Community & Society | 15 comments
ကျနော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပညာရေးနဲ.ဆိုင်တဲ. ကူညီမှုတွေလုပ်ပေးနေတဲ. ပရဟိတ အဖွဲ.လေးပါ။ ဘယ်ကမှ ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ၊ ၀င်ငွေတွေမရပဲ သူရဲ.ရင်းနှီးတဲ.မိတ်ဆွေတစ်ချို. နဲ. အဖွဲ.ထဲက member တွေ၇ဲ. လစဉ်ကြေးလေးတွေ ၊ သူ၇ဲ.ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေထဲက ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ထည်.၀င်ပြီး လုပ်ဆောင်ကူညီပေးနေကြတာပါ။ ဒီလို အသင်းအဖွဲ.လေးတွေ ပေါ်လာတာ ၊ လူငယ်တွေ စုစုစည်းစည်း နဲ.အလုပ်လုပ်တတ် လာတာ ၊ ကူညီချင်စိတ်၇ှိလာတာဟာ ကောင်းတဲ.လက္ခဏာ လို. ကျနော်မြင်မိတယ်။ ဒါပေမယ်. ခက်နေတာက ဒီလိုအဖွဲ.လေးတွေက ကိုယ်.စေတနာနဲ. ကိုယ်လုပ်နေတာမှန်ပေမယ် တရားဝင်မဟုတ်တဲ.အတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတဲ.အခါ နှောက်ယှက်တာတွေ ခဏခဏကြုံကြံနေရသလို အချို.ဟာတွေကလဲ သင်ကြားမှုတွေလုပ်ကြတဲ.အခါ အဆင်မေပြေပြန်ဘူး။ ဥပမာ နယ်ဘက်တွေစာလိုက်သင်တဲ.အခါ ရွာလူကြီးက ကြံ့ဖွတ်ဖြစ်နေတော. “ မင်းတို.က ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်အဖွဲ.လဲ၊ တရားဝင်အဖွဲ.လား” ဆိုတာတွေပေါ.။ သူတို. စိတ်မကြည်ရင် လုံးဝကို ပေးမလုပ်တော.တာ။ ကျနော်အထင်တော. သူတို.မလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို လိုက်လုပ်ပေးရင် သူတို.မူအရ ဘယ်သူလုပ်လုပ်ကြည်မယ်မထင်ဘူး။ နောက်တစ်ခုက နယ်မြေခံလူထု…..။ နယ်မြေခံလူထုကလဲ တရားဝင်အဖွဲ.မဟုတ်ရင် “ ဒါ နိုင်ငံရေးလား၊ စည်းရုံးရေးဆင်းနေတာလား” ဆိုတဲ. အတွေးနဲ. နဲနဲတွန်.သွားပြန်ရော။ ကူညီတဲ.အဖွဲ.ဘက်ကကြည်.ပြန်တော.လဲ စေတနာအလျောက် အပင်ပန်းခံကူညီပေးတာကို နှေက်ယှက်ခံနေရရင် ။ နယ်မြေခံလူထု၇ဲ ယုံ့ကြည်မှုမရရင် ကြာတော. စိတ်ဓာတ်ပါကျသွားနိုင်တယ်။ … ဒါဆို ..တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး Local NGO အဖြစ်ရပ်တည်မလား….? ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားနေမလား ?….
၁။ ပုံမှန် ပရဟိတအဖွဲ.အနေနဲ.ပဲ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်..
—အကျိုးပြုလုပ်ငန်ေးတွလုပ်တဲ.အခါ အနှောက်အယှက်ပေးတာ ခံရနိုင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးကြုံလာရင်လဲ အဖွဲ.က တရားဝင်မဟုတ်တဲ.အတွက် ပြောပိုင်ခွင်. သိပ်ရှိမယ်မထင်ဘူး..။ ကြာရင် member တွေရဲ.လုံခြုံရေးပါ ထိခိုက်လာနိုင်တယ်။
—နယ်ခံလူထုက နိုင်ငံရေးနဲ.ရောပြီး အဖွဲ.အပေါ်ယုံကြည်မှုမရနိုင်ပါ။( ဒါကလဲ ပြည်သူတွေအကြောက်တရား နှစ် ၂၀ ကျော်ဆိုတော. ပြောရတာ အခက်သားဗျ)
—ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် လုပ်ငန်းလုပ်တဲ.အခါ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ၊ သိပ်မတွင်ကျယ်ပဲ ဖြည်းဖြည်းပဲ သွားနိုင်ပါလိမ်.မယ်။ ဒါဆိုးကျိုးပါ….ကောင်းကျိုးတွေအနေနဲ.က….
—မသိမသာလုပ်နေတဲ.အတွက် အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ. သိပ်သတိမထားမိနိုင်ဘူး။ ဒါဆို အဖွဲဝင်တွေရော အားလုံးအတွက်ပါ အန္တရာယ်ကင်းးမယ်။ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ဆက်လုပ်နေနိုင်မယ်။
—တရားဝင် LNGO အဖြစ်မှတ်ပုံမတင်တဲ.အတွက် ကျနော်တို. ဘာလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကို သူတို.ကိုအသိပေးဖို.မလို။ ဒါလဲ အန္တရာယ် ကင်းတာပဲ၊ လေကုန်ပါ သက်သာတယ်။ (တရားဝင်ဆိုရင် ငါတို. ဘာလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီး စိန်ခေါ်သလိုများဖြစ်သွားမလားလို.)
၂။ Local NGO အဖြစ် မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင် …
—တရားဝင်ဖြစ်တဲ.အတွက် အလုပ်လုပ်တဲ.အခါ တစ်ချို.ဟာတွေ မကြိုက်ရင်တောင် သူတို.လွှတ်ပေးရတော.မယ်။ ဒါဆိုလုပ်ငန်း ပိုတွင်ကျယ်လာမယ်။
—နယ်မြေခံတွေမျာက်စိမလည်တော.ပဲ အလုပ်လုပ်တဲ.အခါ ၀င်ရောက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်လာမယ်။
—အဖွဲ.ရဲ. လုပ်နိုင်တဲ.စွမ်းအားကို အပြည်.အ၀ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခွင်. ရှိလာမယ်။
ဒါတွေက ကောင်းကျိုးတွေပါ ။ အဆိုးဘက်ကကြည်.၇င်တော……….
—တရားဝင်အဖြစ်ရပ်တည်ရင် ငါတို.ဘာတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီ သူတို.ကို သွားပြော၊ သွားဆွ သလိုဖြစ်ပြီး လာစောင်.ကြည်.နေပါလို. ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်သွားမယ်။
—အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများများလုပ်လို. သူတို.မျက်စိထဲမတွေ.ရင် ပြသာနာအမျိုးမျိုးလှည့်ရှာလာနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ ကိုကျော်သူ ဖြစ်သလိုမျိုးတွေလိုပေါ.)
ဒါဆို ကျနော်တို. လူမှုကူညီရေးတွေ အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ပရဟိတအဖွဲ.အနေနဲ.ပဲ (မှတ်ပုံမတင်ပဲ)ရပ်တည်သင်.လား….Local NGO တစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်ရပ်တည်သင်.လားဆိုတာသိကြသူများ အကြံပေးကြပါလို. ရွာသူရွာသားအပေါင်းအား မောင်းခတ် နှိုးဆော် အပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
PS…( ကျနော် ngo အကြောင်းများအား အရမ်းပြည်.စုံစွာမသိပါ….သိသလောက် ၀င်ဆွေးနွေးရင်း ရွာထဲကအကြံဥာဏ်တွေကို ရွာပြင်သယ်ပြီး အသုံးချစေရန်ဖြစ်ပါ၏)
ကျနော်သိသမျှ ပ၇ဟိတအဖွဲ.လေးတွေ၇ဲ ကြုံတွေ.ရတဲ. အခက်အခဲတစ်ချို.ကို သူတို.ကိုယ်စား ကျနော်သိသလောက် ဆွေးနွေး အကြံတောင်းတာပါ။
—နယ်ခံလူထုက နိုင်ငံရေးနဲ.ရောပြီး အဖွဲ.အပေါ်ယုံကြည်မှုမရနိုင်ပါ။
တချို့အဖွဲ့တွေက သူတို့အဖွဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ တရားဝင်ဆိုတာလေးပါ ထည့်ပြောတတ်ကြတယ်
နို့မို့ဆို အဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ မရောထွေးရင်တောင် အကျိုးပြုလုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မိရင် အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ထင်ပါတယ်
ဟုတ်တယ် မပန်ပန်..။ နာဂစ် တုန်းကဆို မသင်္ကာလို. ဖမ်းလိုက်ကြတာ တစ်ထွေးကြီးပဲ။ တရားဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုတွေက စပြီးတင်ရတာလဲသိချင်ပါတယ်။
အဲဒါတော့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖူးတော့ မသိပါဘူး
ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာ အမာခံအဖွဲ့ဝင်တွေရှိပြီး အခိုင်အမာ ရပ်တည်နိုင်တာသေချာမှ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်တာကောင်းပါတယ်။
တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီအဖွဲ့အတွက် အချိန်ပေးပြီးအလုပ် လုပ်ရတော့မှာပါ။
ပြီးတော့ အစိုးရပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ၀င်ထွက်သွားလာရတာမျိုးလည်းရှိလာအုန်းမှာဆိုတော့ Donation Group လိုဟာမျိုးက အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လောက်ရှိရင်ပြီးနိူင်ပေမဲ့ Local NGO ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အများကြီးကွာဟ သွားပါလိမ့်မယ်လို့။ (သိထားသလောက်အကြံပြုတာပါ)
I think that you should get advice froma“audit firm”. They know well about “memorundan and articles” (thin pwe sie myin, thin pwe mhat tan)of association.In case of Myanmar, you should need to go by “Law” and “principles” and need to also “register” for it.
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်၊လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးလှုံဆော်ခွင့်တွေ မရမချင်း မှတ်ပုံတင်လည်းဘာမှမထူးပါဘူး။
မိမိတို့ရဲ့ အဖွဲအစည်းကြီးရင် ကြီးသလို၊သေးရင်သေးသလို အရစ်ခံရမှာပဲ…ဒါပေမယ့် နည်းမျိုးစုံနဲ့အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ကြားထဲက ဘာတွေကိုမှ ဂရုမစိုက်ပဲ မိမိတို့လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူမူရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အာဇာနည်အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် သိသလောက် ထိုင်းမှာဆိုရင် NGO မှတ်ပုံတင်ဖို.သိပ်မကြာဘူးဆိုပဲ။ ဒါပဲလေ.. ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းဖို. ကူညီဖို. လုပ်ပေးဖို.လာတာကို အစိုး၇ကလဲ ကူညီသင်.တာပေါ.။ ကဲ ကျနော်တို. တိုင်းပြည်က ဘာဖြစ်နေရတာလဲ ။ တခြားက ကူညီပါမယ်ဆိုတာတောင် ငြင်းနေ၇အောင် … သိပ်များချမ်းသာနေလို.လား ဒါမှမဟုတ် ( ကျနော် အထင် သူတို.အစိုးရကလဲ ၉၀ေ၇ွးကောက်ပွဲကို ကျော်ထားပြီးတရားမ၀င်ဖွဲ.တာဆိုတော. ) ဟီးဟီး …
နောက်တစ်ခု ကျူပ်အမြင်ကတော. (နာမည်ဆိုတာထက် လုပ်၇ပ်တိုင်းက အကျိုးပြုနိုင်ဖို.က အဓိကလို.မြင်တယ်။ အုပ်ချူပ်နေတဲ. အစိုးရကမှ တရားမ၀င်တာ ကျူပ်တို. တရားဝင်လုပ်တော.ရော ဘာထူးမှာတုးန်ဗျ ) တချို.အဖွဲတွေ.ကျတော. အဖွဲစွဲတွေ၊ နာမည်ရဖို.တွေအတွက် for show တွေလုပ်တာတွေလဲ တွေ.ခဲ.ရဖူးတယ်ဗျ။
ရှင်းရှင်းလေးပဲလူဆိုးရေ….. မင်းတို့ဘာအတွက်လုပ်တာလဲ…။ အများအတွက်ရပ်ရွာအတွက်လုပ်တာလား? နိုင်ငံရေးအတွက်လုပ်တာလား? နာမယ်ကြီးချင်လို့လား..။ ? လုပ်ပေးသင့်လို့ လုပ်ပေးနိုင်တာလုပ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လား ဒီတော့ ဘယ်သူ့မှ ခွင့်တောင်းနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး..။ စိတ်သန့်သန့်နဲ့ ဆက်လုပ်ပါ…။ ဘုရားတည်တာ ကျောင်းဆောက်တာ ထက် အားပေးရမဲ့ အလှူ နေရာတိုင်းမှာရှိသင့်တာပေါ့..။ ကိုယ့်စေတနာက ကိုယ့်ပြန်အကျိုးပေးမှာပဲ..။ တစ်နေ့တော့ အောင်မြင်လာရမယ်ဆိုတဲ့စိတ် အဖွဲ့ဝင်တွေ မွေးတတ်ဘို့ရယ် အားမလျော့ ဘို့ စိတ်ဓါတ်အလွယ်တစ်ကူမကျဘို့ ပဲလိုတယ်..။ စိတ်ဓါတ်နဲ့တည်ဆောက်ပါ..။ လိုအပ်တာ လှမ်းပြီးအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်..။ တတ်နိုင်သလောက်ပေးပါ့မယ်…။ နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံရေးစကားတော့ ထည့်မပြောစေ့ချင်..။ ဒါကကိုယ့်ဆန္ဒပါ..။ ကိုယ့်သဘောက တော့ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ဖို့ပဲ..။ ဘယ်NGO ကဘယ်လိုဆိုပြီး ပုံတူကူးချရင်တော့ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး…။ အဓိကက အများကောင်းကျိုးအတွက် အဖွဲ့သားတွေ အားလုံး လုပ်နိုင်တာ လုပ်ချင်စိတ်ရှိတာက အောင်မြင်မှုကိုရမှာပဲ..။ အားလုံးညီရင် ဤတောင်ကျွဲ ဖြစ်သေးတာ …။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ညီညွတ်ဖို့ စိတ်ဝမ်းမကွဲဖို့ အာရုံစိုက်ပါ..။
အရင်ကဆို အဲဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေမှာ eros ရှိတယ်။ သူရေးထားတဲ့စာတွေ အများကြီးပဲ။ သူ့ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲတော့ မသိဘူး။ “eros ရောက်ရာအရပ်က အမြန်ဆက်သွယ်ပါ” လို့ ရွာထဲမှာ လူပျောက်ကြော်ငြာရမယ်ထင်တယ်။
အကို နေ၀န်းနီ..အကိုပြောတာ ကျနော် သဘောပေါက်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။ ကျူပ်ငယ်ငယ်က ဆင်းရဲလွန်းလို. ကျူပ်လိုမဖြစ်အောင် လူငယ်တွေကို ပညာရေးနဲ.ပတ်သက်ပြီး ကူညီချင်တဲ.ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိတယ်။ နာမည်ကြီးချင်ရင်တော. ဟိုးအရင်ခောတ်ကလို ထောင်ကျခံလိုက်ရင် နာမည်ကြီးတာပဲလေ..ဟီဟိ။ အကိုစေတနာနဲ. အားပေးစကားတွေကို ကျူပ်တို.အမြဲမှတ်ထားပါ.မယ် အကို။
အဲင်ဂျီအို ထောင်ဖို့ဆိုရင် အဓိက လုပ်တာက ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန က လုပ်တာ။ အဲင်ဂျီအို ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက် အပေါ်မှာ မူတည် ပြီး ပညာရေးကဏ္ဍ လား၊ ကျန်းမာ ရေးကဏ္ဍလား တစ်ခုခုပေါ့။ အရင်ကတော့ ကျန်းမာ ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဲင်ဂျီအို ကိုပဲ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လက်ခံတယ်။ အခုတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အခု ရှိနေတဲ့ INGO နဲ့LNGO အများစု က ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားကြတယ်။ မိခင်ကလေး တို့ အမျိုးသမီးရေးရာ တို့ လိုတော့ ထဲ့ မပြောကြေးပေါ့။
ပညာရေး ကို အဓိက ရည်မှန်းပြီးလုပ်တဲ့ အဲန်ဂျီအို ဆိုရင် တော့ အရင်က လက်မခံခဲ့ဘူး။ အစိုးရမူဝါဒကို ထိခိုက်လို့ ။ မူဝါဒအရကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးဟာ ပြီးပြည့်စုံနေပြီ အကူအညီမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောရှိတယ်။ တချို့ က ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့နားလည်မှု စာချွန်လွှာထိုးပြီး လုပ်တော့ အကုန်ပဲ။ anti human trafficking, micro credit, loan, agriculture, education, eccd စုံနေတာပဲ။ အဲင်ဂျီအို ဖြစ်တိုင်းတော့ အစိုးရ ကို ကြောက်နေရမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံရေး နဲ့ လုံးဝ ကင်းထားရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ HIV/AIDS ပရောဂျက်တွေ လုပ်နေတဲ့ LNGO တွေ အများကြီးပဲ။ အစိုးရရဲ့Sensitive Issue တွေကိုတော့ေ၇ှာင်ဖို့ လိုတာပေါ့။ ကျော်သူ တို့ က အဲဒါသွားထိတာကိုး၊ ကျော်သူ ရဲ့နာရေး ကူညီမှု ကိစ္စ မဟုတ်လောက်ဘူး၊ ဘုန်းကြီး အရေးအခင်း မှာ ဘုန်းကြီးတွေကို သွားလှူတဲ့ ကိစ္စ ကြောင့်ဖြစ်မယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံ အပြင် က မီဒီယာမှာ ပေါ်တာများလို့ လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ချက်က နာရေးကူညီမှု အသင်း ရဲ့နိုင်ငံခြား funding တစ်ခု ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီတုံးက ပြောကြတဲ့ အချက်တွေပေါ့။ အဲင်ဂျီအို ဖွဲ့ မယ်ဆိုရင်တော့ မှတ်ပုံတင်တာက တစ်ပိုင်းပေါ့၊ ပိုက်ဆံရှာတဲ့အပိုင်း ကကော သေချာပြီလား။ တစ်ချို့ ကတော့ အဲင်ဂျီအို မထောင် နိုင်သေးခင် ပရောဂျက် အသေးလေးတွေကို Proposal တင်ပြီး funding ရှာတာတွေရှိတယ်၊ နောက် လုပ်တာ အောင်မြင် လာမှ funding လဲ ခိုင်မာလာမှ အဲင်ဂျီအို ထောင်ကြတယ်။ အခု LNGO တော်တော်များများက အဲလိုလုပ်တာပဲ။ တစ်ကယ်လို့အရမ်းစိတ် ၀င်စားလို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲင်ဂျီအို ဖြစ်ဖို့ အရေးမကြီးပါဘူး၊ ကိုယ့် အဖွဲ့ နဲ့ကိုယ်ပိုက်ဆံနဲ့ ပဲ လုပ်သွားလိုက်ပေါ့။ လုပ်တာ အကျိုး ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ နောက် အဲင်ဂျီအို အလိုလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ နယ်မြေခံ ဆက်ဆံရေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဗျူဟာ ပါပဲ။ နာမည် ကြီး INGO တွေတောင်မှ ချော့ ပေါင်းနေရတယ်။ ထိပ်တိုက်တော့ တွေ့ လို့ မရဘူး ဆရာတင်ထားရင်တော့ အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကျုပ် အမြင် ဆိုရင်တော့ အဲန်ဂျီအို ထောင်ဖို့ က ဥပဒေပိုင်း၊ နည်းစံနစ်ပိုင်း အတွေ့ အကြုံ နဲ့ ကျွမ်းကျင် သူမရှိရင် လုပ်လို့ မလွယ်ဘူး။ Funding အရမ်းကောင်း ရင်တော့ မဆိုးပါဘူး။ ဒါကြောင့် Funding နဲ့Funding source ပေါ် မူတည်ပြီး ပရဟိတ လား ၊ အဲင်ဂျီအို လား Foundation လား တစ်ခုခု ရွေးရမှာ။ ကျုပ်က vocational skill ကို သင်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ မျိုး လုပ်ချင်တာ ၊ သဘောထား တိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင် တော့ ကောင်းမှာပဲ။
Good to hear from you ..
ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် အကို။ တော်တော်လေးတော. ကျနော်သဘောပေါက်သွားပြီ။ အကိုပြောသလို vocational skill ပိုင်းကို ကျနော်လဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတစ်ခုကို သင်တန်းကျောင်းဖွင်.ထားနိုင်တဲ.အထိ တတ်ကျွမ်းနည်းလည်ထားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို. ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ. လူငယ်တွေရဲ. အနာဂါတ်ကို ပုံဖော်ပေးဖို. ကျနော်လဲမျော်လင်.တယ်ဗျာ။
မှတ်ပုံမတင်တော့ ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကင်းပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြင်ပအလှူငွေများများရဖို့၊ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ဖို့ဆိုရင်တော့ တရားဝင်မှုရှိဖို့ ရှိကိုရှိရမယ်။ စိတ်ပျက်စရာပြောရရင် ပရဟိတအသင်းတွေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထတုန်းက စရိတ်ကျဉ်းပြီး အုပ်ချုပ်စီမံစရိတ်နည်းစွာနဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက် ဆောင်ရွက်နိုင်သလောက် အောင်မြင်လာလို့ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်လိုက်ရော စရိတ်တွေများ၊ တယောက်တပေါက်ဖြစ်၊ ယုံကြည်မှုတွေပျက်၊ စင်ပြိုင်တွေခွဲထွက်နဲ့ အားအင်တွေယုတ်လျော့ကုန်တာပဲ။ အချိန်ကြာလာ၊ အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ ဂွင်တွေ ကိုယ်ကျိုးတွေ ပါလာပြီလေ။ လူများရင် -ျီးများတယ်ဆိုတာ အဲဒါပဲ။